Izingilazi nge nokwehlukana, noma, njengoba ivame ukubizwa kanjalo, izibuko anti-ukukhanya, hhayi kuphela ukugcina ukukhanya. Asiza iso ukuqaphela isithombe wachayeka ngokucace kakhudlwana kwelanga, ngaleyo ndlela kokulungisa wonke Ukuhlanekezelwa engahlosiwe.
Kubonakala kusukela evele ezahlukene, imisebe ungaqhubeka isendleleni ohlangothini mpo noma okuvundlile. Esimweni sokuqala, iso babantu abakwazi ukuhlukanisa phakathi izithiyo izinto ezizungezile. imishayo ovundlile kancane kuyendlulela isithombe lens ukwakha uhluthuke. Ukuqeda ukuhlanekezela yokukhanya izibuko ukusetshenziswa ne athuthukisiwe. Kuyini kube lula ukukuqonda, uma sicabange uhlobo ukuhlunga amabhlogo imisebe ovundlile.
Nokwehlukana indawo - a impahla camera nge mncane ifilimu zokuzivikela. Ukugibela ungqimba ebusweni, imisebe ye-altra esikuthola yibo. Ngenxa yalokho, omunye ubona kuphela thwi iqondiswe amaza okukhanya ukuthi ungagxambukeli umbono lezinto. Ukungabikho imishayo ovundlile kunciphisa ukukhanya nokuqhathanisa i inyuka isithombe, ngaleyo ndlela sinciphise umthwalo phezu kwamehlo.
Ubani odinga izibuko anti-glare
Abasebenzisi ezivamile lens nge nokwehlukana - abashayeli. Ngenxa ingozi izingozi bamane kudingeka ukubonakala ephelele phakathi travel. Izingilazi nge nokwehlukana abashayeli ukuqeda iziphazamiso ezazingase zibe abukelwe njengokusetshenziswa zibona kusukela somoya, ideshibhodi, asphalt elina izibani ngisho aphuphuthekise. Lapho usebenzisa i-lens ukuthi ukuncela emisebe yama-UV, umshayeli kungaba komzamo ukubona izinto endleleni, ngisho ngosuku sunniest. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe baye bafakazela ukuthi izibuko athuthukisiwe kakhulu ngcono umshayeli ukuphendula.
Eyesibili akuxhomekile leqembu okuyinto bagwala ukusetshenziswa lens ezikhethekile zokuzivikela - umdobi. Njengoba umthetho, Ukukhanya kwelanga eshiya ukucabanga eqinile phezu kwamanzi. Ngakho-ke, abalandeli abaningi okhuthele ukudoba baqala ukusebenzisa ngesikhathi ukudoba izibuko nge athuthukisiwe. Kuyini saso? izibuko Anti-glare ukunikela ukubonakala kakhulu we ebusweni amanzi ngisho ngosuku ecacile.
Nokwehlukana udlala indima ebalulekile ezimpilweni abasubathi. Ukukhanya kwelanga kungabangela ukuphazamiseka ngesikhathi surfing noma Ukushushuluza. Lena ngokuphelele, akwamukelekile neze, ngoba ukuntuleka ukubonakala ezinhle akuphephile kubagijimi futhi ngokuvamile kubangela ukulimala.
Izinzuzo izibuko athuthukisiwe
Izibuko nge athuthukisiwe benezingane eziningi izakhiwo ezinhle. Izinzuzo elingenakuphikwa lens anti-lembhali ngokuthi:
Nciphisa umthwalo phezu izinzwa optic.
Vikela amehlo kusukela UV eyingozi.
Thuthukisa ukubonakala ngokunciphisa ukugqama.
Londoloza zemvelo umbala ukukhiqizwa kabusha.
Ngokuyinhloko, amaphutha lens nokwehlukana akuyona futhi awukwazi. Ziyakwazi kulula ukuyisebenzisa futhi ephephile ngokuphelele ukuze ubuke. Njengoba nemibi bungabonakala ngaphandle la maphuzu alandelayo:
Eliphezulu lens anti-glare ibiza kakhulu ukwedlula izibuko abavamile. Intengo yale mikhiqizo kungadala umthengi ukunikela ngakho konke, "imali eningi."
Ngezinye izibuko engcono ngokuvamile embozwe ungqimba elincanyana polarizing. Phakathi ukusebenza, uyashesha laphinde labhidlika nekucala izinhlayiya zeqhwa.
Ngezinye izikhathi izibuko ukushayela phendulela isithombe esikrinini navigation.
Indlela ukukhetha izibuko athuthukisiwe
Ayikwazi ukuthola izibuko jikelele nge athuthukisiwe, kufanelekile yimuphi imvelo. Ochwepheshe batusa ukuthi lapho ukhetha lens anti-lembhali ukwakhela kube nombala wako. Ngokwesibonelo, abashayeli kumele makudle okungenani ezimbili. ukulingana nsundu noma ithusi izibuko nge athuthukisiwe nemibhede ukushayela. Kuyini ikakhulukazi ezisizayo sebuningini wazibonakalisa abasebenzisi: i-contrast isithombe kuyehla, lapho izicubu iso uphumule. Ngaphezu kwalokho, nge ithinti ensundu lens bangcono kunabanye ukuncela ultraviolet ray. Ukuze uthole ukushayela kusihlwa kufanele ukhetha umuntu oyisibonelo ehlukile. Kukhethwa ekahle kungaba izinto abanamalensi ophuzi.
Njengoba for ukudoba, lesi sigaba bese angathengwa eyodwa imodeli amaphuzu. Ngokuphelele wakwazi ukubhekana kangcono nale lens umsebenzi grey. Ziyakwazi Isiza kulabo ziyazithanda ukudoba emanzini ajulile. Lokudoba ngosuku olucwathile ashisayo kungcono makudle izibuko abanamalensi oluhlaza.
Akubona bonke abakhiqizi ukukhiqiza eliphezulu nezimpahla bangempela, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi ukuhlola izibuko nokwehlukana. Ukuze uqonde ukuthi imodeli oyikhethile ngempela ifakwe lens anti-ukukhanya, silula. Kuze kube yimanje, kubalulekile kuphela ukuletha izibuko kunoma LCD. Uma ukushintshanisa lens polarizing i-engela 90 ° isibonisi, isithombe mnyama kakhulu. Spectacle ngaphandle enamathela anti-lembhali , lesi silingo akusebenzi - ngokusebenzisa ingilazi namanje kuyabonakala ngokucacile ukuqapha. Futhi, esikhundleni esibukweni LCD ukuqinisekiswa, ungasebenzisa kwenye pair omunye izibuko nge athuthukisiwe. Ngokuvamile, umphumela kufanele kube okufanayo - omunye lens mnyama.
Amathiphu kulabo ukugqoka izibuko njalo
Ephambi kwezinduna zamehlo kunzima ukugqoka izibuko nge athuthukisiwe. Lokho kuyinkinga enkulu, akunakwenzeka ukusho, kodwa zonke okufanayo ukusetshenziswa lens anti-lembhali kulokhu ezibizayo kancane. Vele ukuthenga izibuko athuthukisiwe ngeke isebenze - kungukuthi eyenzelwe umbono ukulungiswa. Ukuze alungise leso simo ngezindlela ezimbili: ngokugqoka contact lens noma ukusetshenziswa nezimagqabhagqabha ekhethekile anti-lembhali. Inketho yokuqala ngempela disadvantageous ngokwezimali, ngoba kudinga izindleko njalo. Ngaphezu kwalokho, abanye abantu nje ungakhululekile ukugqoka lens.
Okuningi inketho imali eningi - ukuthenga ukunqwabelanisa anti-ukukhanya. Abakwazi esikhundleni izibuko athuthukisiwe. Hlobo luni imikhiqizo, eyaziwa alulona olwawo wonke umuntu. I ipuleti polarizing isakhiwo lens amabili anti-lembhali, ehambisana izibuko ezivamile. Kuyinto elula kakhulu - umkhiqizo kulula unamathisele futhi ususe, ngaphandle kokuphatha kabi umsebenzisi. Kungcono makudle onobuhle nokubopha kuleli bhuloho, njengoba nje kuvamile namanje elula kunazo ukusebenzisa. Kukhethwa ekahle yayiyobizwa Lining elakhelwe ukushayela.
Izibuko lens zenzelwe ukuvikela amehlo womuntu kusuka esiyingozi emisebe yama-UV. Nokho, lo msebenzi Ungasingatha izibuko kuphela athuthukisiwe. Kusho ukuthini lokhu? izibuko Polarizing - lesi simangaliso ubuchwepheshe kuqhathaniswa ezivamile ilanga lens. Ukuze Mods elula akusiyo ewusizo ngakho, kodwa abathandi yokuphila asebenzayo - ezibalulekile.
Umshini emsakazweni - ukuzijabulisa noma ezemidlalo?
Yini benze izikwele ngemuva amashubhu? wokugubha emaphaketheni
Izitshalo ezinesihlungu Russia
I-cuisine yaseBrithani yendabuko: izindlela zokupheka ezingcono kakhulu
Carbon Inamathisela: izinto ezidingekayo kanye namathuluzi, gluing ubuchwepheshe
Ukuhlasela kwamaphekula e yaseBeslan - a okukhulu ukuthi uzobe siyikhohlwe
Bogdinsko-Baskunchaksky Reserve. State Indawo egicna imvelo e-Astrakhan esifundeni